A.K.N CONSTRUCTION GROUP: May 2011
Gtalk နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကို ဖုန်း Message ပို့ဖို့.......
Gtalk ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဖုန်း Message ပို့ရတာ တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဗျ။
ကျွန်တော်တော့ အဲဒီက ပို့ကြည့်ကြည့်တယ် လွယ်လည်းလွယ်တယ်။
ပို့ချင်တဲ့ လူများ အောက်က သေသေချာချာဖတ်ပါ။
အရင်းဆုံး ကိုယ့် Gtalk မှာ gtalk@etmsms.com လို့ invite(add) လုပ်လိုက်ပါ။
အဲဒါဆိုရင် online ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
gtalk message box ထဲမှာ( sms 09+++++++ hello nay kg lar ) အဲလိုမျိုး ရိုက်ရပါတယ်။
country code တွေ ခံစရာမလိုပါဘူး။
ကျွန်တော်အခုရေးလိုက်သော ဖုန်းနံပတ်များမှာ စိတ်ကူးထဲက ပေါ်လာတဲ့ ဖုန်နံပါတ်တွေပါ။ တစ်ကယ်လို့ တိုက်ဆိုင်းပြီး ဖုန်းနံပတ်တူနေတာများရှိရင် ခွင့်လွတ်ပါ။ နိုင်ငံခြားရောက်နေသူများ အားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဒီပို့လေး တင်ဖြစ်သွားတာပါ။
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 9:33 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 9:31 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 9:18 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 4:59 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 4:54 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 4:48 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 4:46 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 4:43 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 4:42 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 4:39 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 4:35 AM No comments:
Download keygen for cinema 4D
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 4:33 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 4:31 AM No comments:
PDF Image Extraction Wizard v3.5
ကဲ ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ Pdf ebooks တွေမှာ ပါတဲ့ပုံတွေကို ပြန်ပြီးတော့ မူရင်းပုံအတိုင်း ပြန်ယူတာပါ . တနည်းအားဖြင့် pdf creator နဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ စာတွေနဲ့ ပုံတွေကို ပြန်ပြီးတော့ ဖြေချလိုက်တဲ့ သဘောပါပဲ . ကဲ အားလုံး အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် .
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 4:29 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 4:28 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 4:27 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 4:26 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 11:41 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 11:24 AM No comments:
php: php အကြောင်းမြန်မာလို့ရေးထာတာများမရှိဘူလားခင်ဗျား ဒါမှမဟုတ် အသုံးပြုပုံပြောပြပါလားခင်ဗျား
Download ifile.it ၊ Download megaupload ၊ Download rapidshare ၊ Download 4shared ၊ Download nyinaymin.net ၊ Download mediafire
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 11:23 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 11:21 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 11:19 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 11:18 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 11:16 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 11:15 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 11:12 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 11:08 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 11:07 AM No comments:
Microsoft Excel book မြန်မာလို
hanmyolin>>>>ကျနော်ကို microsoft Excel book မြန်မာလို ရေးထားတဲ့ စာအုပ် လေးလိုချင်လို့ပါခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးပြုပြီးတင်ပေးလို့ရမလားမသိဘူးဆိုလို့ 
Microsoft Excel မြန်မာလိုရေးထားတဲ့စာအုပ်လေးပါ
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 11:05 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 11:03 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 11:02 AM No comments:
Gmail အသုံးပြုနည်းနှင့် လျှိုဝှက်ချက်များ (မြန်မာလိုစာအုပ်) 503 Kd
Gmail ရဲ့လျှို့ ဝှက်ချက်များအကြောင်းရေးထားတဲ့မြန်မာလိုစာအုပ်အသစ်လေးပါ။
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 11:00 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 10:59 AM No comments:
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 10:56 AM No comments:
Photoshop CS မြန်မာလိုစာအုပ်
Photoshop CS အသုံးပြုပုံကိုမြန်မာလိုရှင်းပြပေးထားတဲ့စာအုပ်လေးပါ။
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 10:54 AM No comments: